प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उपलब्ध गराइयो सीके राउतलाई अंगरक्षक !
काठमाडौं, २६ फागुन । मुलुक विखण्डनको माग गर्दै आएका सीके राउत सुरक्षा चुनौतीका पात्र थिए। सेना र प्रहरीको आँकलन पनि यस्तै थियो ।
सरकारसँग ११ बुँदे सहमति भएपछि भने राउत आफैं ‘सुरक्षा थ्रेट’ मा छन् । त्यसैले सरकारले उनको सुरक्षाका लागि प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) दर्जाका एक जुनियर प्रहरी अधिकृत खटाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा राउतलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले अंगरक्षक उपलब्ध गराएको हो । अंगरक्षकको आवश्यक प्रबन्धको छुट्टै प्रक्रिया छ । हालसम्मको प्रक्रियामा गृहले प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिने र मुख्यालयको सुरक्षा सेवा निर्देशनालयले अंगरक्षक खटाउँदै आएको छ ।
तर राउतलाई दिइएको अंगरक्षक गृहले सीधै प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमार्फत व्यवस्था गरेको छ। उनलाई अंगरक्षक खटाइएको बारे सुरक्षा सेवा निर्देशनालयका प्रहरी अधिकारी बेखबर छन् । निर्देशनालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘यसबारे हामीलाई जानकारी दिइएको छैन र हामीले खटाएका छैनौं । विशेष ठाउँबाट आएकाले गोप्य राखिएको होला ।’
राउतलाई अंगरक्षका केही दिनका लागि हो या सधैंका लागि भन्नेबारे प्रहरी मुख्यालय स्पष्ट छैन । मुख्यालयका ती उच्च अधिकृतले भने, ‘हामी सरकारको निर्देशनविपरीत जाने कुरा भएन । पहिला सीके चुनौती थिए, अहिले उनी आफैं थ्रेटमा देखिन्छन् ।’
छुट्टै मधेस राष्ट्रको अभियान चलाउँदा सीकेका पछाडि थुप्रै युवाशक्ति थिए । सरकारसँग गरेको सहमति राउतको मात्रै रोजाइ हो वा उनको विचारसँग होमिएका युवाशक्तिको हो ? सरकारसामु अहम् प्रश्न तेर्सिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।